One Daily News Archives - ONE DAILY MEDIA
Category: One Daily News
သူမကို အချစ်ပိုအောင်လုပ်နေတဲ့ Jennifer Aniston ရဲ့ ချစ်စဖွယ်အချက်တွေ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။90s ခုနှစ်များအတွင်းမှာ Jennifer Aniston က ငယ်ရွယ်တဲ့ မိန်းကလေးများစွာအတွက် စံနမူနာပြဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ကျော်လွန်ပြီး…
ဒီနှစ်မှာ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့ ဆယ်လီ(9)ဦး မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှကြိုဆိုပါတယ်။ကိုယ်သဘောကျနှစ်သက်ရတဲ့ အနုပညာတွေဆီမှာ ကလေးရလာတဲ့အခါ အဲဒီကလေးကိုပါ ချစ်နှစ်သက်ပေးကြတာပဲမဟုတ်လား ဒီတခါကျွန်တော်တို့pageမှ ဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့ ဒီနှစ်ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဆယ်လီ(၉)ဦးကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cristiano Ronaldoနှင့် Georgina Rodriguez ဘောလုံးအကျော်အမော်ရော်နဒိုကတော့ ဒီနှစ်မှာ…
ငယ်ရွယ်စဉ်အခါတုန်းက ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ မင်းသားကြီးများ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုခေတ် မင်းသားတွေ၊celebrityတွေ ဘယ်လောက်ပဲချောချော၊ဘယ်လောက်ပဲမိုက်မိုက် 90’s တုန်းက မင်းသားတွေ ပေးခဲ့တဲ့vibeကို မင်မင်တော့ပိုကြိုက်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ငယ်စဉ်က ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီးတွေကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gary Oldman…
Celebrityအချို့ကို ပုံစံပြောင်းကြည့်မယ် မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ celebrityတွေဟာ ပုံစံတစ်မျိုးထဲမှာပဲအကြာကြီးနေလေ့မရှိပါဘူး။ခဏခဏပုံစံပြောင်းကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုဖော်ပြပေးမယ့် celeတွေကတော့ပုံစံတစ်ခုထဲမှာ အကြာကြီးပိတ်နေကြလို့ စိတ်မရှည်တော့တဲ့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူအချို့က Photoshopလုပ်ပြီးပုံစံပြောင်းပေးလိုက်ကြပါတယ်။ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ 1. Owen Wilson 2. Rowan Atkinson…
နာမည်ကြီး celebrityတွေ အချိန်နှင့်အမျှ ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာကြသလဲ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လူအများစု အထူးသဖြင့် အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတွေက မအိုဆေးရည်ကို သောက်ထားသလားတောင် ထင်ရပါတယ်။ သဘာဝအရ အိုမင်းလာရမှာပဲ ဆိုပေမယ့် ထိုစကားက သူတို့အတွက် အမှားဖြစ်နေသလိုပါပဲ။ ယခုအခါမှာတော့…
အမွေးထူတဲ့ အစ်ကိုကြီးနှင့် သူရဲ့လူသားညီမတို့ရဲ့ ချိုမြိန်တဲ့နှောင်ကြိုး Marshall ကတော့ Instagram မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အလှလေး Golden Retriever တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က သူ့ရဲ့လူသား ညီမတစ်ယောက်ရလာတဲ့အခါမှာ‌ေတာ့ သူ့ကမ္ဘာက ထာဝရပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။…
တနှစ်ထဲမွေးခဲ့ပေမယ့် အသက်ကွာခြားတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ celebrityများ
တနှစ်ထဲမွေးခဲ့ပေမယ့် အသက်ကွာခြားတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ celebrityများ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတခါကျွန်တော်တို့ Pageမှ ဖော်ပြပေးလိုတာကတော့ တခုနှစ်တည်း မွေးခဲ့ကြပေမယ့် အသက်ကွာတဲ့ပုံပေါ်တဲ့ celebrityအချို့ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁)Lily Collins Vs Dakota Johnson –…
ဖခင်နဲ့ သမီးကြားမှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တွေ့မြင်နိုင်မယ့် ပုံအချို့
Jan 9, 2022 One Daily Media
ဖခင်နဲ့ သမီးကြားမှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တွေ့မြင်နိုင်မယ့် ပုံအချို့ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖခင်တွေက စိတ်ရောကိုယ်ပါ သမီး‌တွေရဲ့ ဘဝမှာ ပါဝင်လာတဲ့အခါ အဲမိန်းကလေးက ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ခံစားလာရပါတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့လည်း အလားအလာရှိတယ်လို့ သုတေသနပညာရှင်တွေက…
Botoxလုပ်ခြင်း ပြုပြင်ခြင်းတွေကို စိတ်မဝင်စားကြသည့် Celebrityများ
Dec 30, 2021 One Daily Media
Botoxလုပ်ခြင်း ပြုပြင်ခြင်းတွေကို စိတ်မဝင်စားကြသည့် Celebrityများ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ပြုပြင်ခြင်းဆိုတာက လူအများကြားမှာ ခေတ်စားပြီး အထူးသဖြင့် သရုပ်ဆောင်များ အဆိုတော်များကြားမှာ ထိုအရာက ပေါ်လွင်လှပါတယ်။ ဒါကြောင့် အများစုက အလှအပဆရာဝန်များနှင့် ဆွေးနွေးကာ အကောင်းဆုံးဆိုသောအရာတွေကို ပြုပြင်ယူကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်…
တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်များ
တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်များ Celebrityတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရင်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အလွန်ပင်ထိန်းသိမ်းကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ကြီးပိုင်း‌တွေဖြစ်တဲ့ 50 60 70ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်မှ ဆွဲဆောင်မှုရှိကြပါသေးတယ်။အခုဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်လေးများဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ celebrityအချို့ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mark Ruffalo Daniel…